Rubric: Dzimwe Nyaya dzeZvamwe
Ndiani anonzi Mr. Heisenberg Santa Claus? Nyika inozivikanwa yakabudisa nyaya inonzi Breaking Bad (mumutauro weRussia wefirimu unonzi Breaking Bad) yakabudiswa mu2008, uye yakanga ichiparadzirwa pane imwe yeTV yeTV.
Iwe kangani unogona kuteerera mimhanzi zvikuru? vavakidzani dastali. uye zviri nyore sei vanhu? Zvakanaka, teerera mimhanzi zvikuru maawa 12, yakakodzera uye iise mukova we moto iwe uye usingaiti ...
Ndechipi musiyano pakati peNazism uye nyika? Ichi ndicho chinhu chimwe chete, asi muzvikamu zvakasiyana. Nazism iyi pfungwa yemamiriro enyika. Unhu hwenyika ndiyo pfungwa yenyika. Unhu hwenyika ndewe muvengi wemarudzi ose, uye Nazism ndiye muvengi ...
Mashoko okuti "Pitchfork pisano" anorevei? Zvakakwana kufungidzira Saltykov-Shchedrin: "Kuoma kwemitemo yeRussia kunobhadharwa nechisungo chisina kusunga chekuuraya kwavo." Izwi iri rinoreva zvinotevera: zvinhu zvose hazvina chokwadi, zvakajeka. Tsanangudzo yepakutanga yezwi pitchfork inotenderera ...
Ndiani akatevera pervitin? Wehrmacht pasi pe "high" "Vadiwa vabereki, hama nehanzvadzi, ndinoshumira muPoland, zvakaoma uye ndinokukumbira kuti unzwisise pandinonyora chete 2-4 yezuva, ...
Chii chinonzi "kukomberedza munhu" chinorevei? Unoziva yakakodhwa here? Izvi zvakaoma zvikuru mugore rekutanga revanhu vaviri vakarasikirwa nehupenyu muupenyu. Yakanyorwa muIzhevsk, realgo ns 5 inobatsira kwemakore! Ndine matambudziko ne ...
Ndeipi mauto ehondo akaenzanirana nenzvimbo ye Stirlitz? polkovnik Iyi ndiyo mutsara wese weSA uye SS uye tsamba dzavo kumativi eWehrmacht Brigadeführer (iyo Brigadefuhrer) iyo iri muSSS neSA, inofananidzwa nechikwata chevakuru vakuru ...
Unotenda here kuti Li Qingyun akararama 256 kwemakore, akazvarwa mu 1677, asi achifira mu 1933 kana kwete? Kana zvakadaro, sei, uye kana kwete? Ndinotenda. Uye ps inomuziva ... muEngland ...
Izwi rokuti "tsika" rinorevei? kunyadzisa, asi tsanangura nzira yekushanda yakagadzirirwa nemabhuku ekuraira uye mirayiridzo pasina chero kukanganisa. Uye nokuda kwezvigadzirwa (zvigadzirwa) uye kune mamwe masangano, mabhizinesi ane vashandi ...
Ndeipi kukwikwidzana kusina kukodzera, uye mienzaniso ipi yechiratidzo ichi iri munhoroondo? http://www.lawmix.ru/comm.php?id=8854 link inodziviswa nechisarudzo chekutungamira kwechirongwa uye pano pamagumo echinyorwa chimwe nechimwe pane zvakanamatira kune mienzaniso: ...
Ini handigone kunzwisisa: zvinobvumirwa kupfeka baton telescopic muRussia here? Ndakatsvaka kwose kwose, handina kuwana mhinduro dzakachenjera. Pane chinhu chakakosha chekuzvidzivirira uye kuzvidzivirira. Chimwe chinhu chinoshamisa - kuunganidza ...
Art. 146 h. 4 Code of Criminal Procedure, chii icho chinyorwa uye chii ichocho? Pano ini handigoni kuwana paInternet, kubatsira "Kutyisa" pasi pechinyorwa ichi hagoni kuita chero chinhu, saka ...
Basa rehurumende mune hupfumi hwemisika? Nenguva pfupi, chaizvoizvo, 2 inopa, kwete kukopa-kunyorera negwenga rezvipfeko zvemasayiti.Inzvimbo yehurumende mumari yepamusi inoratidzwa kuburikidza nemabasa ayo. Chiitiko chehurumende chinangwa chekuzadzisa ...
Social worker. Tinoda gogo kunyora mushandi wepabonde, hatigone kurarama nayo isu pachedu nokuti tinoshanda. Vakasununguka kune vega vakura. Mufambisi wehupfumi achauya 2 nguva pavhiki. Asi kwete zvakare 4 kilograms yemitambo ...
Wati wambove wakaita seizvi: pane musangano unotarisira mberi, uye maoko ako anotya kutyisidzika uye pane kusina musoro mumusoro wako. Kana kuti: manheru anotevera ari mudenderedzwa rehama haafari, asi pane zvinopesana, zvinokonzera kusuruvara, saka ...
rubatsiro munhoroondo !! ! Enzanisa mifananidzo yeZIKI yezvematongerwo enyika yeStalin neKrushchev. basa rezviwero izvi mukufambisa kwenyika rakasunungurwa neHondo Yenyika Yenyika yekutanga kuitira kuti Russia nekunopera kwezana remakore rechi20 risinga ...
Mibvunzo ye100 mu database yakagadzirwa mu 0,851 masekondi.